I-Coral Point Executive Studio Apartment - I-Airbnb
I-Coral Point Executive Studio Apartment
Blackburn, KwaZulu-Natal, iNingizimu Afrika
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Arnold
U-90% wezivakashi zakamuva unikeze u-Arnold izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
ICoral Point izinze eSibaya, indawo entsha sha etholakala ngenhla koMdloti futhi ingelinye lamadolobha asogwini afunwa kakhulu esifundazweni. I-Coral Point inikeza indlela yokuphila yokugcina ebukhoma, yokusebenza neyokudlala enokubukwa okunwetshiwe kolwandle nehlathi elingasogwini. Kuhlanganisa indawo yokuzivocavoca, iphuli, i-clubhouse, ezokuphepha ezingama-24/7 kanye nokufinyelela ku-7km boardwalk (iyeza maduze). Ifulethi lethu elinefenisha yomklami lifaka phakathi ifakwe ngokugcwele i-Netflix, i-wifi engavaliwe, nokunye okuningi.
- Itholakala kuSibaya Drive enkabeni yeSibaya
- Amakhilomitha angu-10 ukusuka eMhlanga Rocks Village ekunikeza ikhono lokujabulela ukuhlehla kuwo wonke umsindo ngenkathi uvale ngokwanele ukuze uhlanganyele ku-vibe.
- Unogada wamahora angama-24
- Ukufinyelela kalula emabhishi okubhukuda aseMdloti
- Pool kanye gym
- Impahla yokuwasha endaweni eyinkimbinkimbi - Imali eyengeziwe
- Indawo yokupaka evikelekile
- I-WIFI engavaliwe
- Ilala kalula engu-2 (umbhede ongu-1 we-Queen)
- Ifulethi lanamuhla, elihlomele kahle futhi elibanzi
- Igumbi le-Studio Elikhulu
- Indawo enkulu eyakhelwe ekhabetheni
- Amalambu aseceleni kombhede okufunda kanye namapulaki anele okushaja
- I-TV ye-LED eneNetflix
- Itafula legumbi lokudlela elinezihlalo ezintofontofo
- Amagumbi okugeza aneshawa enkulu
- Isitsha nendlu yangasese
- Ikhishi lepulani elivulekile elinakho konke ongase ukudinge
- Kunikezwe itiye, ikhofi noshukela (sicela ucele izinto ezengeziwe)
- Igedlela, i-toaster, i-microwave, ihhavini, ifriji/ifriji
AKUKHO UKUBHEMA OKUVUMELEKILE
Kutholakala emahlathini aluhlaza asogwini eSibaya Coastal Precinct Coral Point indawo yokwakhiwa kwamafulethi ayi-152 eyenzelwe ukuphendula imibono yolwandle engaphazanyiswa yalesi siza.
Iqoqo lamabhilidi ngokuhlangana lichaza konke, phakathi kwabo kwakha ipaki emaphakathi enezindawo ezinwetshiwe kwihlathi lasogwini eselivele likhona. Izingodo zemvelo, ukhonkolo ophucuziwe kanye nokutshala komdabu okunothileyo kugeleza phakathi kwamathala avulekile njengokuhlangana komhlaba ozungezile. Ukwakhiwa kwezakhiwo ezindaweni eziphakeme ze-East Wing kuhlehlisiwe, kulula futhi akunaziphazamiso, okuvumela ukuxhumana okuqhubekayo ekubukweni kogu.
Sizokwenza lula ukungena kwakho nokuphuma kwakho. Sivame ukuba nokungena kosuku olufanayo nokuphuma. Isikhathi sethu sokungena singemva kuka-3 ntambama kanti isikhathi sethu sokuphuma singaphambi kuka-10 ekuseni. Sizokuchazela okungena nokuphuma kokubili efulethini kanye nakwisakhiwo. Hlangana nonogada abanobungane endaweni yokwamukela izivakashi bese ubona ukuthi ulisebenzisa kanjani ichibi, indawo yokuzivocavoca nokuwasha. Kukho konke ukuhlala kwakho sihlala simane singumyalezo / izingcingo ze-Airbnb.
Sizokwenza lula ukungena kwakho nokuphuma kwakho. Sivame ukuba nokungena kosuku olufanayo nokuphuma. Isikhathi sethu sokungena singemva kuka-3 ntambama kanti isikhathi sethu sokuph…
Hlola ezinye izinketho ezise- Blackburn namaphethelo